မီးမီးခဲအတွက် အမှတ်တရဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ထွက်ရှိလာတဲ့ မီးနိုရဲ့ သီချင်းအသစ်
See u again in Heaven! လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။
မီးနိုဟာ မီးမီးခဲရဲ့ အမှတ်တရတွေ အများကြီးထည့်သွင်းပြီး အဆိုတော်ပေါင်းများစွာနဲ့ အတူ See u again in Heaven! ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး ထွက်ရှိလာပါပြီ။
အဆိုတော် မီးနိုးကတော့ သူအရမ်းချစ်ရတဲ့ အဆိုတော် မီးမီးခဲ အတွက် သတိရလွမ်းဆွတ်ခြင်းတွေနဲ့ See u again in Heaven! ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ် ဖန်တီးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီသီချင်းမှာ အနုပညာရှင်များစွာ ပါဝင်ရုံသာမက မီးမီးခဲရဲ့ အမှတ်တရ ပုံရိပ်တွေလည်း အများကြီး ထည့်သွင်းထားတယ်လို့ မီးနိုက Duwun ကို ပြောပါတယ်။
“See u again in Heaven! သီချင်းထဲမှာ အနုပညာရှင် တော်တော်များများလည်း ပါပါတယ်။ အဆိုတော်တွေ အများကြီး၊ We Love တွေလည်း အများကြီးပါထားတယ်။ ပြီးတော့ မမီးမီးခဲရဲ့ ရုပ်ကဒ်လေးတွေ၊ ဓာတ်ပုံလေးတွေလည်း အများကြီးပါထားတယ်။ See u again in Heaven သီချင်းလေးကမမီးမီးခဲ ဆုံးပြီးတော့မှ ကိုဆလိုင်းက ရေးစပ်ပေးတာ။ မမီးမီးခဲကို အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ တစ်နေ့ကျရင် ကောင်းကင်ယံမှာ ပြန်ဆုံကြမယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အားလုံးစုပြီး သီဆိုထားတာပါ။” လို့ သူကဆိုပါတယ်။
“See u again in Heaven! သီချင်းလေးထဲမှာ မီးနိုနဲ့ အတူ Jenny ၊ ဟန်ထူးဈာန်၊ လိမ္မော်သီး၊ ထွန်းရတီ၊ ဟဲလေး၊ ကျော်သီဟ၊ ကောင်းကောင်း၊ ဇွဲပြည့်၊ ဝေကြီး၊ ပိုင်တံခွန်၊ ရှိုင်းဝေယံ၊ Danial Saw၊ စောထက်နိုင်စိုး၊ ရဲလွင်၊ နီနီခင်ဇော်၊ ဖြူဖြူဟန်၊ ဘီလီလမင်းအေး၊ ဇာဈာန်ဟန်သာ၊ ဘေလီဆုသံသာ၊ Mei Mei၊ မေချစ်သွေး တို့က ပါဝင်သီဆို သရုပ်ဆောင်ထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးကိုတော့ နိုဝင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့ မနက် (၉) နာရီက မီးနိုရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်မှာ ပရိသတ်နဲ့ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ မီးမီးခဲကို ချစ်ခင်အားပေးသလို အနုပညာရှင်တွေကို ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း သီချင်းလေးကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကို Comment တွေမှာ ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
မီးနို အနေနဲ့ မီးမီးခဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရတွေ အများကြီး ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးအချိန် ဖျော်ဖြေပွဲ လာလုပ်သွားတဲ့ မီးမီးခဲနဲ့ ဆုံခဲ့တုန်းက အမှတ်တရလေးတွေကတော့ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သူက ပြောပါတယ်။
“ မီးနိုရဲ့ Main Concert ပြီးတော့ အစ်မလည်း Solo Show လေး လာလုပ်သွားတယ်ပေ့ါနော်။ နေရာကလည်း တော်ဝင်ဂါးဒင်း အတူတူပဲ။ သူ့ ဖျော်ဖြေပွဲမှာ မီးနို အဆုံးထိနေတယ်၊ သူနဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်တယ်၊ အနမ်းလေးလည်း ပေးခွင့်ရလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ သူ့ အတွက် နောက်ဆုံးဆိုတာ မီးနို မသိဘူး။ကြိုသာ သိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့ဘေးနားမှာ နေပြီး အစအဆုံး လိုက်လုပ်ပေးမှာပါ။ ပြန်မရတော့တဲ့ အချိန်တွေ အတွက် အရမ်းနှမြောတယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။
မီးနိုကတော့ သီဆိုလိုက်တဲ့ သီချင်းတိုင်းကလည်း အချစ်သီချင်း ချိုချိုလေးတွေ၊ အသည်းကွဲသီချင်းလေးတွေဖြစ်လို့ ပရိသတ်နားထဲကို စွဲနေတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ သူမဟာ “ အနိုင်အရှုံး” ၊ “ ပြိုင်ပွဲ” စတဲ့ တစ်ကိုယ်တော်အခွေတွေ ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး “ ဘုရားပေးတဲ့ဆု” ၊ “ Dreams Come True” စတဲ့ Single Song လေးတွေလည်း ထွက်ရှိထားပါသေးတယ်။ လက်ရှိ အောင်မြင်မှု ရနေတဲ့ သီချင်းကတော့ မီးနိုကိုယ်တိုင် သီဆိုထားတဲ့ " အနှောင်အဖွဲ့" သီချင်းလေးပါပဲ။ ဒီသီချင်းဟာ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ဝင်တေးတွေမှာလည်း တွေ့ရတတ်သလို လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာလည်း ရေပန်းစားလျှက်ရှိတဲ့ သီချင်း တစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။